ငါးမင်းဆွေမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သို့ (၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » ငါးမင်းဆွေမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သို့ (၂)
ငါးမင်းဆွေမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သို့ (၂)
Posted by kai on Nov 25, 2010 in Critic | 32 comments
ငါးမင္းေဆြမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သို႔ (၂)
ရန်ကုန်ကနေ ပို ့လာတော့ တင်ပေးလိုက်တာပါ..။ ခေါင်းစဉ်ကို ဒေါ်စုကြည်လို့မဟုတ်ပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို့ ပြင်ပါတယ်လို့ … ငါးမင်းဆွေက ပြောထားပါတယ်..။
စာတင်တာဟာ ပွဲဆူအောင်တော့ မဟုတ်..။ သမိုင်းမှတ်တမ်းလေးကျန်ရစ်စေချင်လို့ဖြစ်ပါကြောင်းနဲ့… မကျေနပ်သူများက ကောမန့်ရေးရင် ..မဆဲကြစေလိုပါကြောင်း…
ယူအက်စ်ရဲ့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ဆိုတဲ့ စာအဓိပါယ်မှာတော့ နိုင်ငံရေးသမားကို လူထုထဲကတယောက်က(အတိုင်းအတာတခုအထိ)ဆဲဆိုလို့ရပါတယ်..။
အပြန်အလှန် တောင်ပန်ကြေအေးတာလည်း လုပ်ရပါတယ်..။
ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည်ဓလေ့ထုံးစံနဲ ့က အမြင်ရိုင်းစေတာမို့..စာပေါ်တင်ပြီး မဆဲကြစေလိုတာပါ။
please not share such this stupid minswe whose face look like …….as i see his image at NLD yesterday.He is not seem to gentle.Also his ideas go to old times.,not useful..crazy..
ိုကိုခိုင်ရေ ဒေါ်စုကို ဝေဖန်တိုင်းသာ မှတ်တမ်းကျန်အောင် တင်ထားရရင် ငါးမင်းဆွေသာမက နောင်လည်း ဖားမင်းဆွေ၊ ဖွတ်မင်းဆွေ၊ ကြွက်မင်းဆွေ၊ ကျီးမင်းဆွေတွေ လာပါလိမ့်အုံးမယ်။ လူတိုင်းလွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲခွင့်ရှိလို့ ပို့စ်တင်တာကို မကန့်ကွက်ပါ၊ ဒါပေမဲ့ လူရွေးပြီး တင်စေလိုပါသည်။ ဒီလူဘာဆိုတာ သူရေးသောစာများက သက်သေထူနေပါသည်။ လူလေးစားသော သို့မဟုတ် ဟုတ်ဟုတ်ငြားငြားရှိသော လူတယောက်က ဝေဖန်သည်ဆိုလျင် အယ်ဒီတာအနေဖြင့် တင်ပေးသည်မှာ အဓိပ္ပါယ်ရှိပါသေးသည်။
သူ့စာအတွက် ကွန်မန့်ကတော့ !@#$%
ဟဲ…ဟဲ.. အယ်ဒီတာက ဘက်လိုက်ပြီး ..မဆဲ..အဲ.အဲ.. ဝေဖန်ခွင့်မရှိဘူးလေ.။
အဲဒါကြောင့် .. ကြိုးဝိုင်းပေါ်.. ကြိုးတုပ်ပြီး …တင်ပေးလိုက်တယ်ပဲ..ဆိုပါတော့..။
ဒီလိုလူမျိုးကို sub-human-being လို့ဆိုချင်ပါတယ်။ သူရေးပြီးသူတွေးတာကိုထောက်ခံတာသူတယောက်ပဲရှိပါတယ်။ အဲ..ယောင်လို့..။ဗိုလ်သန်းရွှေနဲ့အပေါင်အပါများကတော့ သူ့ကိုအသုံးချလို့သိပ်ကောင်းနေပါတယ်။
ဆိုတော့ “အသုံးချခံလူ့အောက်ကလူ” ပေါ့…။
နဝတအာဏာသိမ်းပြီးစက၊ စစ်အစိုးရအသစ်ကျပ်ချွတ်ရဲ့ mouth-piece ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိခဲ့သူ ဦးကျော်ဆန်း (ဒုဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်း နှင့် လမ်းစဉ်လူငယ်စည်းရုံးရေးဗဟိုကော်မတီရဲ့တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူးလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးသူ) က ပါတီဌာနချုပ်က ဦးသိန်းစိန် (ပြန်ကြားရေးဒုဝန်ကြီးဖြစ်ခဲ့သူ) နဲ့ပေါင်းပြီး၊ “လုပ်ချ”ဇာတ်လမ်းတွေဆင်ပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေ၊သတင်းစာဆောင်းပါးတွေနဲ့ “ငါးမင်းဆွေ”လိုနွှဲခဲ့ပေမဲ့အာဏာမဲ့သွားတဲ့အချိန်မှာတော့၊ နီးစပ်သူတွေကိုအဲ့ဒီနဝတ (တဖြစ်လဲ) နအဖ အစိုးရကိုကော်ဆဲတဲ့အလုပ်တွေပဲလုပ်ခဲ့လေရဲ့..။
ဒီလူက ကြုံတုန်း နာမည်ကြီးအောင် နာမည်ကြီးမယ့်အကွက်ထွင်ချင်တဲ့ အပေါစားကောင်ပါ။
သူရေးတာ သူပေါက်ကရလျှောက်ပြောနေတာ လူတွေကြားထဲမရောက်လေပိုကောင်းလေပေါ့။
သူနာမည်ကြီးအောင်လုပ်ပေးနေသလို… သူ့အရူးချီးပန်း ကို ပျံ့အောင်လုပ်ပေးသလိုဖြစ်နေတာပေါ့။
အယ်ဒီတာက သိစေချင်လို့တင်ပေးတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Ma Kalayar says:
Fish Min Swe
Your Brain is look like animal. Alll the people know real situation whatever you say.We love and adore her because of sacrifice. Do you dare to sacrifice your possess /your son / your wife for our country? They occupied good position and good things. Please think deeply Do you really love myanmar people?
if you really love myanmar people,you don’t do like that.
ဘုန်းကြီးဆွမ်းခံကြွတာ အိမ်ရှေ့လာအလှူခံတာမြင်လို့ သခင်အားရအောင် အစွမ်းကုန်လည်ချောင်းကွဲမတက်ဟောင်နေတဲ့ ခွေးတကောင်လောက်တောင် အဖိုးမတန်တဲ့လူပါလား ။ နိမ့်ကျတဲ့အတွေး မပြည့်ဝတဲ့စိတ်ဓါတ်နဲ့ ကိုယ့်စားခွက်လေး အဆီရွှဲဖို့ကို ယောကျာ်းတန်ဖိုးအကျခံပြီး ကလီကမာလုပ်ဖို့လည်း ဝန်မလေးပါလား ။ နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာတွေမှာ စာမူရေးနေတဲ့ မိန်းမလျာကြီးရေ …. ကိုယ့်လိပ်ပြာကိုယ်လုံပါစေ။ အိမ်မက်ဆိုးတွေမမက်ပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်နော် ။
ဒါနဲ့… သူ့ရဲ့ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်လေးများသိရမလားပဲ .. လိပ်စာလေး၊ ဖုန်းနံပါတ်လေးရရင်ပိုကောင်းတာပေါ့ .. ။ ဒီမှာ မန်းပြီးတော့မဆဲချင်ပါဘူး သူမှမသိနိုင်တာ …။ တကယ်ဆက်သွယ်လို့ရမဲ့ contact details လေးသိရင်တော့ အီရတ်မှာကျတဲ့ဒုံးကျည်လိုမျိုး ကြားရဆိုးတဲ့စကားတွေ နားထဲအဆက်မပျက်ပစ်သွင်းလိုက်မယ် ။
ဓါတ်ပုံလေးများရရင် ရသလိုတင်ပေးပါလား ။ မျက်နှာချင်းဆိုင်လမ်းမှာတွေ့ရင် လူစိတ်ပြန်ပေါက်ပြီး အသိဝင်အောင် ပါးရိုက်ချင်လို့ ။
သတင်းစာမှာ ဆောင်းပါး ရေးနေတဲ့သူတွေကို ရွံနေတာ တော်တော်ကြာပီ.. အခုအွန်လိုင်းအထိပါတက်လာတယ်… တော်တော်အရှက်မရှိ သောက်ခွက်ပြောင်တဲ့သူပါလား..
အေးကွာ… စစ်အစိုးရရဲ့ မီဒီယာကို မီဒီယာနဲ့ ပြန်တိုက်မယ့်… အကြံထဲမှာ… ဒီကောင်ကြီး. ပါပုံရတယ်…. သွားစမ်းပါဗျာ…. ခင်ဗျား… ဆောင်းပါးတွေ ဂျာနယ်ထဲ ပါလာလဲ… ဘယ်သူမှ မဖတ်ဘူး… စာရွက်လေးတာပဲ အဖတ်တင်တာ… လုံးဝ အထင်ကြီးလို့ မရတာ…
သင်းစာကို ဖတ်ရတာ အခြေခံပညာအတန်း ကျောင်းသားရေးတဲ့ စာစီစာကုံးဖတ်ရတာလောက်တောင် feel မလာဘူး။
တကဲ့ chicken shit letter ပါ။ ကလေးတွေကို ဥပမာပေးမယ်ဆိုရင် ပြစရာတစ်ခုတော့ ရတာပေါ့
ကိုခိုင်ကမဆဲပါနဲ့ဆိုလို့သာ ဒီ….သားဆောင်းပါးတွေဖတ်မိယင်အကုသိုလ်များတယ် ။။
နံမည်ကြီးချင်လို.စတန်.ထွင်တယ်ဆိုရင်လည်း ရေမရှိတဲ့ချောင်းမှာ နှာခေါင်းဖေါ်ပြီးသေပြလိုက်ပေါ့ ငဖားကြီးမင်းဆွေ ရယ် …. ဘာဖြစ်လို. လူထုရဲ.မျှော်လင့်ချက်ကို ရင်းချင်ရတာလဲ … တစ်ဘဝ ခဏကောင်းစားတာကို မကြည်.ပါနဲ. … ကိုယ့်လိပ်ပြာ ကိုယ့်ခုံရုံးမှာ အစစ်ခံနိုင်ဖို.ကပိုအရေးကြီးပါတယ် … ခလေးတွေလောက်တောင်မှ စဉ်းစားဆင်ခြင်ဉာဏ်မရှိတာ တော်တော်ရှက်ဖို.ကောင်းပါတယ် ….
ကဲ ….. etone ရေ။
ဒါကတော့ ဧရာဝတီဘလော့ရဲ့ comments မှာတွေ့လို့ ပြန်ကူးတင်ပေးတာပါ။
ရေးသူက ……. Anonymous
ငါးမင်းဆွေ ရဲ့အိမ်က လှိုုင်မြင့်မိုရ်အိမ်ယာ မာတလိလမ်း ဘူတာရုံလမ်းမှတ်တိုင် လှိုင်မြို့နယ် ဖြစ်ပါတယ်။
၁၀/သဖရ (နိုင်) ဝ၄၃၈၀၅
တိုက် ၁၄၊ အခန်း ၁၆
ဖုန်း – ၅၂၇၇၆၇၊ ဝ၉ ၈၇၁၈၀၈၀
အောင်သိန်းလင်းပြီးရင် နောက်တစ်ခါ ချီးထုပ်က သူ့အလှည့် ဖြစ်တော့မယ်နဲ့ တူပါတယ်။
ကျေးဇူးပဲနော် white ရေ ။ ဒီအကောင်ကိုဆဲပစ်ရမယ် ။မသာကောင်က ဖုန်းတောင်ကိုင်မှာမဟုတ်ဘူး ။
နောက်တစ်ခေါက်ဒီလို Post မျိုးမတင်ဖို့ တောင်းဆိုပါရစေ။ အဲဒီသူတောင်းစား နာမည်ကြားတာနဲ့တင် အော့နှလုံးနာ ရွှံရှာလွန်းလို့ … ရုပ်ကိုက ကြာကူလီ ဖာကောင်းရုပ်။
မတင်ရင် တို့ရွာသားတွေမသိလိုက်မှာဆိုးလို့ တင်ပေးတာပေါ့ ။ ဘာဖြစ်ဖြစ် ဒီအကောင့်အကြောင်းသိသွားတာပေါ့ ။
ဟုတ်တယ် အဲလိုကောင်မျိုးစာတွေ မဖတ်ချင်ဘူးဗျာ.. အကုသိုလ်ဖြစ်လို့။
အခု ဒီခွေးမင်းဆွေ ပေါ်ပေါ်တင်တင်ကြီး အမေစုကို လာတွေ့ချင်တယ်။ ဘာရယ်လို့လုပ်လာတာ လုံးဝမရိုးသားဘူး။ ပြောချင်တာက စစ်ခွေးတွေဘက်က ဘာအကြံတွေ ရှိနေသလဲမသိဘူး။ ဒီကောင်ကို ချကျွေးပြီး တဘက်လက်နဲ့ ဘာခွေးကျင့်ခွေးကြံ ကြံမလိုလဲမသိဘူးနော်။ ဒီကောင် သတင်းစာတွေမှာ ရေးနေတာကြပြီ တခါမှ ရုပ်မမြင်ရဘူး။ အခုမှ ကျက်သရေမရှိတဲ့ ရုပ်တွေဘာတွေ ပေါ်လာပြီး အမေစုဆီလာပြီး ရုပ်ပြတော့ လုံးဝမရိုးသားဘူး။
အားလုံး ဒီဆောက်ရူးကို ဂရုစိုက်မနေနဲ့ ဒီကောင်တွေကိုလည်း မချေမပြတ်စေကြနဲ့။ စစ်ခွေးတွေ ဘာတွေ ကြံနေလဲမသိဘူး။
အရင်က အင်တာနက်ဆိုင်မှာ ဗုံးပေါက်တာတို့၊ မန္တလေးမှာ ဗုံးပေါက်တာတို့ဆိုတဲ့ ကလေးအကွက်တွေက ပြည်သူတွေသိနေကြပြီ ဒါကြောင့် ဘာအကွက်ပြောင်းလိုက်တာလဲ မသိဘူး။ အားလုံး သတိ။
အဲဒီလူ အကြောင်းကို ကြားတိုင်း..တွေ့တိုင်း…မြင်တိုင်းအကုသိုလ်ဖြစ်ရပါသည်။ သူက အမေစုအတွက် ကားမောင်းပေးအုံးမယ် ပြောပါတယ်။ ချီးကားပဲ သွားမောင်းပါလို့ ကောင်းချီးပေးချင်ပါတယ်။
အေးဟုတ်တယ် ဒီကောင်မောင်းသင့်တာချီးကား…ခွေးမင်းဆွေတဲ့လါး အို…ဒီနံမည်လေးလဲမဆိုးပါဘူး ။ ယဉ်ယဉ်လေးရူးနေတာဖြစ်မယ် ဒါလဲဖြစ်နိုင်တယ်လူကောင်းဆို ဒီလိုလုပ်ရပ်မျိုးဘယ်လုပ်မှာလဲ လို့…..။။
ကာရံ လိုက်အောင် ငါး ==>နွား လောက်လုပ်ပါ
ကန်းနင်း လာဥ ဆီပန်း လန်ကျောက်
ဟို ချီးဘုံးကြဲတဲ့ ဖျော်ဆရာကြီးပု ကို အကွက်ဆင်ဖန်းနေလားသိဘူးနော်
ဖျော်ဆရာကြီးပုနဲ ့နီးစပ်တဲ့သူတွေ ဝိုင်းဝန်းပြီး အကြံပေးလိုက်ကြပါဦး လုံးဝမလုပ်ရှားဘို ့ကို
မစုစုနွေး တုန်းကလည်း ဒါမျိုးဘဲလေ သူတို ့မသိမသာ ဆင်ထားတဲ့ အကွက်ထဲကို ဝင်သွားတာဘဲ ဂလား
တတ်နိုင်ရင် ပေးစာအဖြစ်နဲ ့ပို ့စ်တစ်ခု တင်ပြီး အကြံပေးလိုက်သင့်တယ်ဗျို ့
( ကျုပ်ကတော့ ငါးခေါင်းဟင်းချက်တဲ့နေရာမှာ EXPRESS ဘဲ)
ဒါဟာ ထောင်ချောက် ဆင်ထားတာဘဲဖြစ်မယ်..
ါ့မင်းဆွေေ့ရှမှာ နာမဝိသေ သ အနေ နဲ. ငါးလို. ထည်.မဲ. အစား သတ္တာဝါ ချင်းအတူတူ ခင်ဗျား လုပ်ရက်လေး နဲ. လည်းလိုက်မဲ. ဖား မင်းဆွေ ပဲ နောက်ရေးမဲ. ကလောင်တွေမှာထည်. ပေးစေချင်ပါတယ်တောင်းဆိုတာပါ မှတ်ချက်။။ ။။းဒါလေးတော.မကျန်စေနဲ.းဒါကျနရင် ခင်ဗျား တဆွေ တမျိုး လုံး သွားပြီ ။။
နေ ဘုန်းလျံ says:
ငါး ဟင်း မကြိုက်တတ်တဲ့ ကျွန်တော်ကိုမှ ဒီလူကြီး အကြောင်း တွေ့ရတယ် လို့ သူမိန်း မ (ဘီယာ ဆိုင် နဲ့ အနှိပ်ခန်း က အပျက် မ ကို ) စိန်လည်ဆွဲဆင် ယဉ်ပေး ချင် ပုံဘဲ အိမ်က ကြောင်တွေကိုတောင် ငါးဟင်းနဲ့ မကြွေးတော့ဘူး ဒီ သူခိုး သောက် ကျင့်နဲ့ တူလာမှာစိုးလို..။ ဟေ့ ယောက်ကျား ….သယ် ဟန်းဖုန်း ဘယ်နှစ် လုံး ရလဲ မင်း အောင် သိန်း ငပျင်း … ပေးတာ ဒီလို အဌာတွေ ရိုး နေပြီ တောမှာသွာပြော လိုက် ငဆွေ ရေ…။
အော် တခုကျန်သွားတယ် ဒီလူ မကြာခင် နအဖ ပေးတဲ့ မုန့်ပုံးရတော့မယ် ….
လှိုင်မြင့် မို က အိမ်ရာတွေက တိုက်တွေဗျ ဒီ တခါ ချီး ထုပ်နဲ့ ပြစ် လိုတော့မရဘူး မြင့်လို့တဲ့ ကျွန် တော် စသူငယ်ချင်းကပြောတယ် ဂျင် ကလိနဲ့ ဘဲ ည ဘက် ဘီယာဆိုင် အပြန် ကစ် မယ်တဲ့ ရနှစ်လောက် က ထီးကိုး လက် မှာ ကျွန်တော် တို သူငယ်ချင်းသေတာ စကောပီယန် ဂိုဏ်း ကို ဒီ လူ သတင်း ပေးတာကြောင့်လို အတိကြ ပြောလာကြပြီ…ပြည် တွင်းမှ သတင်း အချို့၏ ရလဒ်..။